Chelsea Oo Guul Weyn King Power Uga Gaartay Leicester City City Una Talaabsatay Wareega 4 Ee FA Cup %
Goolal ka kala yimid Alvaro Morata iyo Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, ayaa waxay keeneen kooxda kubada cagta Chelsea ay usoo baxdo wareega Afar dhamaadka koobka xiisaha leh ee FA Cup-ka, ayna 2-1 ay uga soo badiyeen dhigooda Liecester City, ciyaar loo baahday in 30 daqiiqo oo dheeri ah lagu daro.
Goolkii Morata oo ahaa mid aan inaba caadi ahayn ayaa wuxuu yimid daqiiqadii 42aad ee qeybta koowaad, iyadoona uu ahaa goolkiisii ugu horeeyay tan iyo bishii December, isagoona ka baxay habaarkii ka haystay dhanka gooldhalinta.
Ciyaaryahan Morata ayaa waxaa ugu dambeysay inuu gool uu udhaliyo kooxdiisa Blues ciyaar ay ka hortageen bishii December, dhigood Brighton, taasoo ka tirsaneed horyaalka koowaad ee aduunka ugu xiisaha badan ee Premier League.
Laacibkaan ayaa wuxuu soo gaba gabeeyay 13 kulan oo xiriir ah, kuwaasoo uusan dhalin wax gool ah ama uusan soo taaban shabaqa, isagoona udhaliyay kooxdiisa gool ay si weyn ugu baahneed, maadaama uusan jirin tartan kale, oo ay uhardamayaan.
Sidoo kale, goolka Jamie Vardy ayaa wuxuu yimid daqiiqadii 76aad ee qeybta labaad, maadaama qeybtii koowaad lagu kala baxay 1-0 oo ay Blues leedahay – Iyadoona goolka Verdy uu niyad jab badan ku riday taageerayaasha Blues oo guul ubaahnaa
Goolka Verdy ayaa wuxuu ka dhigan yahay inuu yahay kiisii 10aad ee uu ka dhaliyay 12 kulan oo uu ka hor-tegay kooxaha waa weyn ee horyaalka Premier League dhamaan tartamada oo dhan, waana laacib dhab ahaantii ay ku tiirsan tahay kooxdiisa.
Inta kulanka uu socday Blues ayaa kubada haysatay 60% halka Leicester City ay haysatay 40% – Sidoo kale waxaa la bixiyay Labo kaar oo Jaalo ah, kaasoo la kala siiyey labadaan kooxood, iyadoona uusan jirin ciyaaryahan Kaar Gaduudan la siiyey.
Ugu dambeyn, labadda dhinac ayaa waxay ku kala baxeen 90-ka daqiiqo iyo Labo daqiiqo oo dheeri ah oo lagu daray 1-1, waxaana la aaday 30 daqiiqadood oo dheeri ah kadib markii ay sameeyeen labadda dhinac wada tashiyo fiican.
Conte ayaa wuxuu kulanka bedal ku keenay ciyaaryahankii hore ee Barcelona, wiilka lagu magacaabo Pedro, kaasoo kooxdiisa udhaliyay goolka guusha daqiiqadii 105aad ee qeybta koowaad ee 30-kii daqiiqo ee lagu daray.
Goolka uu dhaliyay Pedro, ayaa wuxuu ka dhignaa inuu ku lug-yeeshay Sideed gool 10-kiisii kulan ee ugu dambeysay ee uu Chelsea, udheelo FA Cup-ka [Lix gool ayuu dhaliyay – Labana waa uu caawiyay] taasoo ka dhigan inuu yahay mid wax qabad leh.
Aakhritaankii, kulanka ayaa wuxuu kusoo dhamaaday 2-1, oo ay guusha ku raacday Blues, iyadoona sidaas ugu soo baxday wareega Afar dhamaadka koobka koowaad ee ugu faca-weyn guud ahaan wadanka Ingiriiska iyo aduunka.
Wareega afar dhamaadka ayaa waxaa laga heli doonaa kulan weyn, kaasoo noqon kara midkood – Manchester United vs Tottenham – Tottenham vs Chelsea – Man United vs Chelsea – maxaa yeelay Southampton, waa kooxda kaliya ee heerkaan joogta.